မနက်ပိုင်း အိပ်ရာက ထလာတာနဲ့ ဘုရားဝတ်ပြု မေတ္တာပွားပြီး ကိုယ်တိုင်ဖျော်တဲ့ ကော်ဖီလေးကို သောက်နေလိုက်တယ်..ဟုတ်တယ်လေ..အိန္ဒိယမှာနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်ကို အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်မဲ့သူလဲ ရှိတာ မဟုတ်ဘူး..ဒါကြောင့်မို့ ..ကိုယ်တိုင်ဖျော်ရင်း ကော်ဖီသောက်နေမိတယ်...
ကော်ဖီသောက်ရင်း စဉ်းစားမိတာက..ဘာကြောင့် ကော်ဖီသောက်မိပါလိမ့်ပေါ့.. ဒီနေ့အတွက် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ပရိယတ္တိသာသနာ ပဋိပတ္တိသာသနာ ပဋိဝေဓသာသနာ ..အဲဒီသာသနာသုံးရပ် စဉ်ပင် ပြန့်ပွားရေးအတွက် ငါ့ခန္ဓာကိုမှာ ခွန်အားရှိမှဖြစ်မယ်..
ဒီတော့ အားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့..မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟောကြားထားတဲ့ ခွန်အားနှစ်မျိုးကို စဉ်းစားမိတယ်.
နံပါတ် (၁) က ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းဆိုတဲ့ ခွန်အား နံပါတ် (၂) က ပွားများခြင်း ခွန်အားဆိုပြီး နှစ်မျိုးဟောထားပါတယ်။
ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်း ခွန်အားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့....ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ (ကာယကံနဲ့)လုပ်တဲ့ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေရဲ့လက်ငင်းဘ၀ ဆိုးကျိုးတွေ နောက်ပြီး တမလွန်ဘ၀ဆိုးကျိုးတွေ..မိမိရဲ့ နုတ်ကလေးနဲ့(၀စီကံနဲ့) မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတဲ့ လက်ရှိဘ၀ဆိုးကျိုး တမလွန်ဘ၀ဆိုးကျိုးတွေ မိမိစိတ်မှာ (မနောကံ) မကောင်းတဲ့စိတ်တွေ အဖြစ်များနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီမကောင်းတဲ့ စိတ်လေးရဲ့ခုဘ၀ဆိုးကျိုးတွေ နောင်ဘ၀ဆိုးကျုိုးတွေ..အဲ..အဲဒီလို စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်....ကိုယ့်မှာ မကောင်းတဲ့ အပြုအမူတွေ မကောင်းတဲ့ အပြောတွေ...အဲ..နောက်ပြီး မကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ မဖြစ်တော့ဘူး...ဒါဟာ စဉ်းစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ခွန်းအားတစ်ခုပေါ့...
ပွားများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခွန်အားဆိုတာကတော့ ...ကိုယ်ဟာ သမထဘာဝနာ ဒါမှမဟုတ် စွမ်းနိုင်ရင် ၀ိပဿနာဘာဝနာပေါ့နော်..အဲဒီ ဘာဝနာနှစ်မျိုး တစ်မျိုးမျိုးကို ပွားများနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာ လောဘတွေ ဒေါသတွေ နောက်ပြီး မောဟတွေပေါ့နော့်...အဲဒီလို အကုသိုလ်စိတ်တွေ မဖြစ်တော့ဘူး..အဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေ မိမိမှာ မဖြစ်တဲ့ အတွက် မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေ မပြုလုပ်မိတော့ဘူးပေါ့...မကောင်းတဲ့ အကုသိုလ်တွေ မလုပ်မိတဲ့အတွက် ကိုယ်မှာလည်း မကောင်းကျိုးတွေ မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ..ဒါဟာ ပွားများခြင်းကြောင့် ရလာတဲ့ ခွန်အားဘဲ.... ကဲ..ကိုယ်လဲ..ကော်ဖီသောက်ပြီး ခွန်အားရှိရဲ့ လားလို့ ..စဉ်းစားရင်း.....
Posted by yankin at 8:11 PM
Pagemaker, InDesign နှင့် ဇော်ဂျီ... ...
Blogger အတွက် Wordpress Themes (Templates)
Making Wordpress Blog (cbox)
Showing posts with label Blog. Show all posts ...
Cbox အကြောင်း သိကောင်းစရာလေးများ w...